XOG: Xildhibaano Mooshin Gudbiyey & Xaalad ka taagan Gudaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo Khilaafka Khaliija+Qatar | Garoowe.net	 #ref-menu
XOG: Xildhibaano Mooshin Gudbiyey & Xaalad ka taagan Gudaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo Khilaafka Khaliija+Qatar
Waxaa Akhristay 606
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay Mooshin ka gudbiyeen Dowladda Imaaraadka Carabta oo lagu eedeeyay in ay fara gelin cad ku heyso arrimaha Siyaasadda Soomaaliya.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay sababta ay Mooshinka uga gudbiyeen Imaaraadka Carabta in ay tahay, falal ay u arkeen in ay yihiin qalad oo uu sheegay in uu ku dhaqmo safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Axmed Othman Al Hammadi.
Wuxuu sheegay in aysan ka warqabin in Dowladdiisa ay ogtahay iyo in kale, ayna doonayaan in wax la wanaajiyo, lana xoojiyo xiriirka ka dhaxeeya labada dal, maadaama arrimo badan ay wadaagaan.
Xildhibaan Zakariye oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Mooshinka uu ku qoran yahay eedeymo badan oo ay u jeedinayaan Imaaraadka, kuwaasi oo uu sheegay in ay ka mid yihiin in Ciidamo ay iska qoroto iyo in shacabka ay si toos ah ula xiriirto.
Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha la xiriira Saaxadda Siyaasadda Soomaaliya, kadib go’aankii dhexdhexaadnimada Dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay Khilaafka dalalka Khaliijka ka taagan.
Qaar ka tirsan madaxda Maamul Goboleedyada dalka ayaa dhawaan safar ku tagay Magaalada Abu Dubai ee dalka Isu taga Imaaraadka Carabta, iyaga oo la soo kulmay madax ka tirsan Imaaraadka, si ay taageero ugu fidiyaan go’aankii Xulufada Sacuudiga ay ku xanibeen Dowladda Qatar.